Magaalada Hargeysa Somaliland oo saacadihii lasoo dhaafaya ay gaareen wafdi ka socday dowladda Kenya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Magaalada Hargeysa Somaliland oo saacadihii lasoo dhaafaya ay gaareen ...
Magaalada Hargeysa Somaliland oo saacadihii lasoo dhaafaya ay gaareen wafdi ka socday dowladda Kenya.
Magaalada Hargeysa ee Caasimada Somaliland ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray wafdi ka socday dowladda Kenya, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Magaaladaas.
Ujeedka wafdiga ka socday Kenya oo Khuburo ah ayaa waxaa uu ahaa sidii loo dardar-gelin fulinta heshiis Somaliland iyo Kenya ay 15-kii bishii December 2020 ku kala saxiixdeen Magaalada Nairobi.
Wafdiga ayaa kormeero kala duwan ku sameeyay Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Magaalada Hargeysa, isla markaana kulan la qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland, iyagoona ka wada hadlay Arrimo ku aadan shaqada Garoonka Cigaal.
Wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibedda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan oo ka hadlaayay socdaalka wafdiga ka socday Kenya ayaa waxaa uu sheegay in ujeedka wafdiga uu ahaa dardar-gelinta sidii loo fulin lahaa heshiisyadii ay Somaliland iyo Kenya wada galeen gaar ahaan midka ku aadan dhinaca duulimaadyada.
Sido kale Wasiir ku-xigeenka ayaa waxaa uu intaas kusii daray in Kenya u soo dirtay Kooxo kormeer ku sameeya Garoomada Somaliland, isagoona Carabka ku dhuftay inay labada dhinac ay dhameystiri doonaan heshiisyadii ay horey u wada galeen.
Kenya iyo Somaliland ayaa sanadkii 2020 heshiiyay in Kenya ay Qunsuliyad ka furato Magaalada Hargeysa sanadkan 2021, isla markaana diyaaradda Kenya Airways ay duulimaad toos ah ka bilowdo Bisha Somaliland.
Previous articleMarkab nooca shidaalka qaada oo ku sugnaa Xeebaha dalka Syria oo Gantgaal lagu dhuftay.
Next articleMadaxweynaha Dalka Masar oo ku soo rogay Xukun Xaallad Deg-deg ah dalkaasi.
Oral and dental problems are more common in people these days. To control these problems many products and medicines have been introduced into the...
Dowlada Itoobiya oo si kulul u eedeysay Dowladaha Masar iyo...